MCPA | Ofsted and Results
MCPA bụ akụkụ nke Greater Manchester Academies Trust
Zute ndị ọrụ
Ọhụụ, Uru na Ethos
Ruby ụlọ akwụkwọ Dog
Ofsted na nsonaazụ
Ebumnuche na usoro
Ihe Anyị Na-amụta na Mgbe
Webụsaịtị bara uru Maka Ụlọ
Usoro Coronavirus na ụbọchị ụlọ akwụkwọ
Nri ụlọ akwụkwọ
Otu ndị nne na nna lekwasịrị anya
Ozi Nlele mbụ
OFSTED na nsonazụ
Ofsted kwuru na anyị 'dị mma' n'akụkụ niile.
​ MCPA bụ gara na 10th na 11th nke Ọktoba 2017 maka nyocha mbụ Ofsted zuru ezu, nsonaazụ ya dị 'mma'. Ndị nyocha chọpụtara na ụlọ akwụkwọ ahụ na-edu nke ọma ma na-achịkwa ya; nkuzi na mmụta dị oke mma; Nchekwa siri ike yana na omume na ọdịmma ụmụaka na-akwado nke ọma n'ime afọ niile a kuziri. Ha kwukwara na ụlọ akwụkwọ ahụ nwere ikike ịga n'ihu ma nwee 'nlekwasị anya na ọganihu ụmụ akwụkwọ'.
Obi dị anyị ụtọ karịsịa na ndị ọrụ nyocha ahụ nwetara ụkpụrụ nnabata nke ụlọ akwụkwọ anyị na ụkpụrụ ya, na-ekwupụta na 'E nwere asụsụ 25 dị iche iche a na-asụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ma a na-emeso ụmụ akwụkwọ ọ bụla dị ka onye si n'otu ezinụlọ.'
Ndị ntụkwasị obi, ndị isi ụlọ akwụkwọ, ndị gọvanọ na ndị ọrụ na-anya isi nke ukwuu maka nsonaazụ a na akụkọ a, nke anyị na-akpọ gị ka ị gụọ. Ndị ọrụ anyị ga-aga n'ihu n'ịkwalite ụlọ akwụkwọ ahụ, hụ na nwa ọ bụla nọ na MCPA nwere agụmakwụkwọ kacha elu enwere ike, bụ nke kwesịrị ya.
N'okpuru ị ga-ahụ njikọ na webụsaịtị Ofsted, n'ebe ahụ ị nwere ike ịchọ akụkọ ụlọ akwụkwọ. https://reports.ofsted.gov.uk/provider/21/140482
Tebụl arụmọrụ DfE -
Njikọ dị n'okpuru bụ maka tebụl arụmọrụ ụlọ akwụkwọ praịmarị, ndị a dabere na nsonaazụ afọ 6, MCPA enwebeghị ụmụ akwụkwọ Y6 yana dị ka ndị dị otú ahụ adịghị egosipụta na tebụl.
Manchester Communication Primary Academy bụ akụkụ nke Greater Manchester Academies Trust
Paykwụ nne na nna
Aha nke ntụkwasị obi : Greater Manchester Academies Trust
Nọmba ụlọ ọrụ: 6754335
Ụlọ ọrụ edebanyere aha: Ọrụ ụlọọrụ Oakwood, Ụlọ nke atọ, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT
Nọmba ekwentị r: 0161 202 0161
49 Parkstead ụgbọala